Siyaasada Asturnaanta - Carewell SEIU 503
La cusbooneysiiyay: Meey 22, 2020
Siyaasaddan asturnaanta ah ayaa sharxaysa siyaasadahayaga iyo habraacyadayada ururinta, isticmaalka iyo siidaynta macluumaadkaaga marka aad isticmasho adeega oo ay kuu sheegayso xuquuqdaada asturnaanta iyo sida sharcigu kuu ilaalinayo.
Waxaan u isticmaalnaa xogtaada gaarka ah si aan u bixino oo u horumarino adeega. Adigoo isticmaalaya adeega, waxaad ogolaatay ururinta iyo isticmaalka macluumaadka si waafaqsan siyaasaddan asturnaanta ah.
Turjumaad iyo Qeexitaanno
Erayada kuwaas oo xarafka hore la weyneeyay waxay leeyihiin macne lagu qeexay xaaladahan soo socda.
Qeexitaannada soo socdaa waa inay lahaadaan macne isku mid ah iyadoon loo eegin inay u muuqdaan kali ama jamac.
Ujeedooyinka siyaasaddan asturnaanta ah:
Adiga waxaa loola jeeddaa qofka helaya ama isticmaalaya Adeegga, ama shirkadda, ama hay’ad kale oo sharci ah oo wakiil ka ah qofkaas oo helaya ama isticmaalaya adeegga, sida ay khusayso.
Sida ku cad GDPR (Xeerka Ilaalinta Xogta Guud), waxaa lagugu tilmaami karaa Mawduuca Xogta ama Isticmaalaha maadaama aad tahay shaqsiga isticmaalaya Adeegga.
Shirkadda (oo loo yaqaan midkood "Shirkadda", "Anaga", "Anaga" ama "Kayaga" ee heshiiskan) waxaa loola jeedaa RISE Partnership, 525 NE Oregon St. Portland, AMA 97232.
Ujeedada GDPR, Shirkaddu waa Maamullaha Xogta.
Xiriirinta macnaheedu waa hay’ad maamusha, gacanta ku haysa ama ku hoos jirta maamulka guud ee xisbi, halkaas oo "maamulidda" macnaheedu waa lahaanshaha 50% ama in ka badan saamiyada, danta sinnaanta ama dammaanadaha kale ee xaqa u leh inay u codeeyaan doorashada agaasimayaasha ama maaraynta kale ee awooda.
Akoonku waxay ka dhigan tahay akoon gaar ah oo laguu sameeyay si aad u hesho adeegayaga ama qaybaha adeegayaga.
Websaydku waxa loola jeedaa Carewell SEIU 503, oo laga heli karo carewellseiu503.org
Adeegga waxaa loola jeedaa Websaydka.
Dalka waxa loola jeedaa: Oregon, Mareykanka
Bixiyaha Adeegga macneheedu waa qof kasta oo dabiici ah ama sharci ah kaas oo xogta ku isticmaala magaca Shirkadda. Waxa loola jeedaa shirkado dhinac saddexaad ah ama shakhsiyaadka ay Shirkaddu shaqaalaysiiso si ay u fududeeyaan Adeegga, si ay ugu bixiyaan Adeegga magaca Shirkadda, si ay u qabtaan adeegyada la xidhiidha Adeegga ama in ay ka caawiyaan shirkadda falanqaynta sida adeegga loo isticmaalo.
Ujeeddada GDPR awgeed, Adeeg bixiyayaasha waxa loo tixgaliyaa Hab sameeyayaalka Xogta.
Adeegga Warbaahinta Bulshada ee dhinaca saddexaad waxaa loola jeedaa websayd kasta ama shabakada websaydka bulshada kasta kaas oo loo marayo in Isticmaaluhu ka geli ama u samayn karo akoon si uu u isticmaalo adeegga.
Bogga Shirkadda ee Facebook waa astaanta guud ee lagu magacaabo Carewell SEIU 503 oo ay si gaar ah shirkaddu uga samaysay shabakadda bulshada ee Facebook, lagana heli karo https://www.facebook.com/CarewellSEIU503
Xogta Shakhsiyeedka waa macluumaad kasta oo la xidhiidha shakhsi la aqoonsaday ama la aqoonsan karo.
Ujeedooyinka GDPR, Xogta Shakhsi ahaaneed waxaa loola jeedaa macluumaad kasta oo kula xidhiidha adiga sida magaca, lambarka aqoonsiga, xogta goobta, aqoonsiga onlaynka ama hal ama dhowr arrimood oo u gaar ah jir ahaan, nafsiyeed, hidde, maskaxeed, dhaqaale, dhaqan ama aqoonsiga bulshada.
Ujeedooyinka CCPA, Xogta Shakhsiyeedka micnaheedu waa macluumaad kasta oo aqoonsanaya, la xidhiidha, sharaxa ama awood u leh in lagu xiro, ama si macquul ah lagugu xidhiidhin karo, si toos ah ama si dadban, adiga.
Kuukyada waa faylal yaryar oo la dhex geljiyo kumbuyuutarkaaga, aaladda mobaylka gacanta ama aalad kasta oo websaydku leeyahay, oo ay ku jiraan faahfaahinta taariikhdaada wax ka daalacashada ee websaydkaas oo ay ka mid yihiin adeegsigeeda badan.
Aaladda macnaheedu waa qalab kasta oo laga heli karo Adeegga sida kombuyuutar, taleefoonka gacanta ama tablet-ka dhijitaalka ah.
Isticmaalka Xogta waxa loola jeedaa xogta si toos ah loo ururiyey, ha ahaato mid ay soo saartay isticmaalka Adeegga ama kaabayaasha Adeegga laftiisa (tusaale ahaan, muddada booqashada bogga).
Maamulaha Xogta, ujeedooyinka GDPR (Xeerka Ilaalinta Xogta Guud), waxaa loola jeedaa Shirkada sida qofka sharciga ah kaas oo keligiis ama si wadajir ah ula jira kuwa kale ayaa go’aaminaya ujeedooyinka iyo habka habaynta Xogta Shakhsi ahaaneed.
Ha Raad Raacin (DNT) waa fikrad ay dhiirrigeliyeen hay’adaha sharciyeynta ee Mareykanka, gaar ahaan Guddiga Ganacsiga Federaalka ee Mareykanka (FTC), ee warshadaha internetka si ay u horumariyaan oo ay u hirgeliyaan hab loogu oggolaado isticmaaleyaasha internetka in ay maamulaan la socodka hawlahooda onlaynka ah ee guud ahaan websaydyada.
Ganacsiga, ujeedada CCPA (Sharciga asturnaanta Macmiilka California), waxaa loola jeedaa Shirkada sida hay’ad sharci ah taas oo ururisa macluumaadka shakhsiga ah ee Macaamiisha oo go’aamisa ujeedooyinka iyo habka habaynta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee Macaamiisha, ama magaca macluumaadkaas waa la ururiyaa iyo taas oo keligiis, ama si wadajir ah kuwa kale, ayaa go’aamiya ujeedooyinka iyo habka habaynta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee macaamiisha, kuwaas oo ka ganacsada Gobolka California.
Macmiilka, ujeedada CCPA (Sharciga Asturnaanta Macmiilka California), waxaa loola jeedaa qof dabiici ah oo degan California. Degane, sida sharciga lagu qeexay, waxaa ka mid ah (1) qof kasta oo USA kunool wax aan ahayn si ku meel gaar ama ujeedo ku meel gaadh ah, iyo (2) qof kasta oo degan USA oo kunool meel ka baxsan USA si ku meel gaar ah ama ujeedo ku meel gaadh ah.
Iibinta, ujeedada CCPA (Sharciga Asturnaanta Macmiilka California), macneheedu waa gaditaanka, kiraynta, sii daynta, shaacinta, faafinta, samaynta la heli karo, wareejinta, ama si kale ula xidhiidho hadal ahaan, qoraal, ama qaab elektaroonig ah ama siyaabo kale, macluumaadka shakhsiyeed ee Macaamilka ganacsi kale ama dhinac saddexaad oo lacag ah ama tixgelin kale oo qiimo leh.
Uruurinta iyo Isticmaalka Xogtaada Shaqsiyeed
Noocyada Xogta La Ururiyay
Annagoo isticmaaleyno Adeeggayada, waxa laga yaabaa in aan ka codsano inaad na siiso macluumaad gaar ah oo shakhsi ahaan lagugu aqoonsan karo kaas oo loo isticmaali karo in lagula soo xidhiidho ama lagugu aqoonsado. Macluumaadka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo waxaa ka mid noqon kara, laakiin kuma koobna:
Magaca koowaad iyo magaca awoowga
Cinwaanka, Wadanka, Gobolka, ZIP-ka/koodka boostada, Magaalada
Xogta isticmaalka si toos ah ayaa loo ururiyaa marka la isticmaalayo Adeegga.
Xogta Isticmaalka waxa ku jiri kara macluumaadka sida Cinwaanka borotokoolka Internetka ee Aalladdaada (tusaale Ciwaanka IP-kA), nooca baraawsarka, naqshada baraawsarka, boggaga Adeeggayaga aad booqato, wakhtiga iyo taariikhda booqashadaada, wakhtiga aad ku qaadatay boggagaas, aqoonsiga qalabka gaarka ah iyo xogta kale ee ogaanshaha.
Marka aad Adeegga ku hesho ama adigoo istimaalayo aaladda moobaylka, waxa laga yaabaa in aanu si toos ah u ururinno macluumaadka qaarkood, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku koobnayn, nooca aalada moobaylka ee aad isticmaashid, aaladaada Aqoonsiga gaarka ah ee moobaylka, ciwaanka IP-ka ee aaladaada moobaylka, nidaamka hawlgalka moobaylka, nooca baraawsarka Internetka mobaylka ee aad isticmaasho, aalad gaar ah oo lagugu aqoonsan karo iyo xogta kale ee ogaanshaha.
Waxa kale oo laga yaabaa inaan ururinno macluumaadka uu baraawsarkaaga soo diro mar kasta oo aad soo booqato Adeeggayaga ama marka aad adeegga ka hesho ama adigoo isticmaalayo aalladda mobaylka.
Macluumaad ka yimid Adeegyada Warbaahinta Bulshada ee Dhinaca Saddexaad
Shirkaddu waxay kuu ogolaanaysaa inaad samaysato akoon oo aad gasho si aad u isticmaasho Adeegga adigoo isticmaalayo Adeegga Warbaahinta Bulshada dhinaca saddexaad:
Haddii aad go’aansato inaad iska diiwaangeliso ama haddii kale fasax noo siiso isticmaalka Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Dhinaca Saddexaad, waxa laga yaabaa inaan ururinno xogta shakhsiyeed taas oo horayba ugu xidhanneed akoonkaada Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Dhinaca saddexaad, sida magacaaga, cinwaankaaga iimaylka, hawlahaaga ama Liiskaaga xiriirka ee la xidhiidha akoonkaas.
Waxa kale oo aad heli kartaa ikhtiyaarka ah in aad macluumaadka dheeraadka ah la wadaagto Shirkadda adiga oo isticmaalaya akoonka Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Dhinaca Saddexaad. Haddii aad doorato inaad bixiso macluumaadkaas iyo Xogta Shakhsiyeedka, inta lagu kudo jiro diiwaangelinta ama haddii kale, waxaad siinaysaa Shirkadda ogolaanshaha isticmaalka, wadaagga, iyo kaydinta si waafaqsan siyaasaddan Asturnaanta ah.
Tignoolajiyada Dabagalka iyo Kuukyada
Waxaan isticmaalnaa kuukyada iyo tignoolajiyada la midka ah ee raadraaca ah si aan ula socono hawsha Adeegeena oo aan u kaydino macluumaadka qaarkood. Tignoolajiyada raadraaca ee la isticmaalo waa seerayaal, calaamado, iyo qoraallo si loo ururiyo loona daba galo macluumaadka iyo si loo wannaajiyo loona falanqeeyo Adeegeena.
Waxaad ku amri kartaa baraawsarkaaga inuu diido dhammaan Kuukyada ama inuu muujiyo marka kuuka la dirayo. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan aqbalin Kuukyada, waxaa laga yaabaa inaadan awoodi doonin inaad isticmaasho qaybo ka mid ah Adeeggayada.
Kuukyadu waxay noqon karaan kuukyo "joogta ah" ama "Waqti ah". Kuukyada joogtada ahi waxay ku sii jirayaan kombuyuutarkaaga gaarka ah ama aaladda moobaylka markaad khadka ka baxdo, halka Kuukyada Casharka la tirtirayo si dhakhso leh isla markaad xidho baraawsarkaaga. Baro wax badan oo ku saabsan kuukyada "Waa maxay Kuukyada" maqaalka.
Waxaan u isticmaalnaa labada casharka iyo Kuukyada joogtada ah ujeedooyinka hoos ku xusan:
Kuukyada muhiimka ah / lagama maarmaanka ah
Nooca: Kuukyada casharka
Waxaa maamula: Anaga
Ujeedada: Kuukyadani waxay muhiim u yihiin inay ku siiyaan adeegyada laga heli karo ayadoo la isticmaalayo websaydyada iyo inay awood kuu siiyaan inaad isticmaasho qaar ka mid ah astaamaheeda. Waxay caawiyaan si loo xaqiijiyo isticmaalayaasha oo ay ka hortagaan isticmaalka khayaanada ah ee akoonka isticmaalaha. Kuukyadaan la’aanteed, adeegyada aad codsatay lama bixin karo, oo waxaan kaliya u isticmaalnaa kuukyadan si aan kuu siino adeegyadaas.
Siyaasadda Kuukyada/Ogaysiisyada Aqbalaada Kuukyada
Nooca: Kuukyada Joogtada ah
Ujeedada: Kuukyadani waxay caddeeyaan haddii isticmaalayaashu ay aqbaleen isticmaalka kuukyada ee Websaydka.
Ujeedada: Kuukyadani waxay noo ogolaanayaan inaan xasuusanno xulashooyinka aad sameyso marka aad isticmaasho Websaydka, sida xasuusashada faahfaahintaada galitaanka ama doorbidida luqadda. Ujeedada Kuukyadani waa inay ku siiyaan khibrad shakhsiyeed oo dheeraad ah iyo inaad iska ilaaliso inaad dib u geliso dookhyadaada mar kasta oo aad isticmaasho Websaydka.
Kuukyada Dabagalka iyo Hawlfullinta
Waxaa maamula: Dhinacyada Saddexaad
Ujeedada: Kuukyadan waxaa loo isticmaalaa si loo daba galo macluumaadka ku saabsan taraafikada Websaydka iyo sida isticmaalayaashu u isticmaalaan Websaydka. Macluumaadka lagu soo ururiyey ayadoo la isticmaalayo Kuukyadan ayaa laga yaabaa si toos ah ama si aan toos ahaynba kuu aqoonsan doona booqde shakhsi ah. Tani waxaa sababta u ah xogta la ururiyey waxay caadi ahaan ku xidhan tahay aqoonsi been abuur ah oo la khuseeysa aaladda aad isticmaasho si aad u gasho Websaydka. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaan u isticmaalno kuukyadan si aan u tijaabino xayeysiisyo cusub, bogag, astaamo ama waxqabadka cusub ee Websaydka si aan u aragno sida isticmaalayaashayadu uga falceliyaan.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kuukyada aan isticmaalno iyo xuloshooyinkaaga khuseeya kuukyada, fadlan booqo Siyaasaddayada Kuukyada.
Isticmaalka Xogtaada Shakhsiga ah
Shirkaddu waxay u isticmaali kartaa Xogta Shakhsi Ahaaneed ujeedooyinka soo socda:
Si aan u bixino oo aan u joogtayno adeegayaga, oo ay ku jirto la socodka isticmaalka adeegayaga.
Si aad u maareeyso Akoonkaada: si aad u maareeyso diiwaangelintaada sida isticmaalaha Adeegga. Xogta Shakhsi ahaaneed ee aad bixiso waxay ku siin kartaa marin u helka hawlaha kala duwan ee Adeegga kuwaas oo aad heli karto isticmaale diiwaangashan ahaan.
Si loo fuliyo qandaraaska: horumarinta, u hoggaansanaanta iyo fulinta qandaraaska iibsiga ee alaabta, qalabka ama adeegyada aad soo iibsatay ama qandaraas kasta oo kale oo naga dhexeeya adoo adeegsanayo Adeegga.
Si aan kula Soo Xidhiidho: Si aad kula soo xidhiidho iimayl, telefoonada, SMS, ama qaabab kale oo u dhigma oo isgaarsiin eletroonig ah, sida ogeysiisyada riixitaanka dallabka mobaylka ee khuseeya cusboonaysiinta ama isgaarsiinta macluumaadka ee la xidhiidha shaqooyinka, alaabaha ama adeegyada qandaraaska, oo ay ku jiraan cusboonaysiinta amniga, marka loo baahdo ama macquul ah hirgelintooda.
Si aan kuu siino wararka, soo jeedinta gaarka ah iyo macluumaadka guud ee ku saabsan badeecadaha kale, adeegyada iyo dhacdooyinka aan bixino kuwaas ooo la mid ah kuwa aad horay u soo iibsatay ama aad wax ka weydiisay ilaa aad dooratay inaadan helin macluumaadkaas.
Si loo maareeyo codsiyadaada: Si aad u xaadirto oo aad u maareeyso codsiyada aad Innaga noo soo dirto.
Waxaa laga yaabaa inaan la wadaagno macluumaadkaaga shakhsiga ah xaaladaha soo socda:
Adeeg bixiyayaasha: Waxaa laga yaabaa inaan macluumaadkaaga shakhsiyeed la wadaagno Bixiyeyaasha Adeegga si aan ula soconno oo aan u falanqeyno isticmaalka Adeeggayada, si aan kula soo xiriirno.
Wareejinta Ganacsiga: Waxa laga yaabaa in aanu la wadaagno ama ku wareejino macluumaadkaaga khaaska ah ee la xidhiidha, ama inta lagu jiro wada xaajoodka, midoobid kasta, iibinta hantida Shirkadda, maalgelinta, ama iibsiga dhammaan ama qayb ka mid ah ganacsigayada shirkad kale.
Xiriiriyayaal: Waxaa laga yaabaa inaan macluumaadkaaga la wadaagno asxaabtayada, markaas waxaan uga baahan doonaa kuwa raacsan inay ixtiraamaan siyaasaddan asturnaanta ah. Xidhiidhada waxaa ka mid ah shirkaddayada weeyn iyo shirkado kasta oo kale ee yaryar, shuraakada wadaagga ah ama shirkado kale oo aan gacanta ku hayno ama ay nala maamusho.
Wadahawlgalayaasha Ganacsiga: Waxaa laga yaabaa inaan macluumaadkaaga la wadaagno wada hawlgalayaashanada ganacsiga si ay kuugu soo bandhigaan alaabooyin, adeegyo ama dalacsiin gaar ah.
Isticmaalayaasha kale: marka aad la wadaagto macluumaadka shakhsiyeed ama aad si kale ula falgasho meelaha caamka ah isticmaalayaasha kale, macluumaadka noocaas ah waxaa laga yaabaa inay daawadaan dhammaan isticmaalayaasha waxaana laga yaabaa in si guud loogu qaybiyo dibadda. Haddii aad la falgasho isticmaalayaasha kale ama aad iska diiwaan geliso Adeegga Warbaahinta Bulshada ee dhinaca saddexaad, xiriirada aad ku leedahay Adeegga Warbaahinta Bulshada ee Dhinaca Saddexaad waxa laga yaabaa inay arkaan magacaaga, astaantaada, sawirradaada iyo sharraxaadda hawshaada. Sidoo kale, isticmaalayaasha kale waxay awood u yeelan doonaan inay arkaan sharaxaadaha hawshaada, kula soo hadlaan oo ay arkaan astaantaada.
Haysashada Xogtaada Shaqsiyeed
Shirkaddu waxay hayn doontaa xogtaada shakhsiga ah oo keliya ilaa iyo inta lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka lagu sheegay siyaasaddan asturnaanta ah. Waanu hayn doonaa oo u isticmaali xogtaada khaaska ah ilaa xadka lagama maarmaanka ah si aan ugu hogaansano waajibaadkeena sharciga ah (tusaale ahaan, haddii nalooga baahan yahay in aan haysano xogtaada si aan ugu hoggaansanno sharciyada khuseeysa), xalinta khilaafaadka, iyo fulinta heshiisyadayada sharciga ah iyo siyaasadahayada.
Shirkaddu waxay sidoo kale hayn doontaa Xogta Isticmaalka ujeedooyinka falanqaynta gudaha. Xogta Isticmaalka guud ahaan waa la hayaa muddo gaaban, marka laga reebo marka xogtan loo isticmaalo xoojinta amniga ama hagaajinta shaqada Adeegeena, ama sharci ahaan waxaa waajib nagu ah in aan xogtan haynno muddo dheer.
Wareejinta Xogtaada Khaaska ah
Macluumaadkaaga, oo ay ku jirto Xogta Shakhsi ahaaneed, waxaa lagu farsameeyaa xafiisyada shirkadda ee shaqeeya iyo meelaha kale ee ay ku yaalaan dhinacyada ku lugta leh habaynta. Waxay la macno tahay in macluumaadkan lagu wareejin karo – oo lagu hayo – kombiyuutarada ku yaala meel ka baxsan dalkaaga, gobolkaaga, waddankaaga ama awood kale oo dawladeed halkaas oo sharciyada ilaalinta xogta ay ka duwanaan karaan kuwa xukunkaaga.
Oggolaanshahaaga siyaasaddan asturnaanta ah oo ay ku xigto soo gudbintaada macluumaadkan ayaa ka dhigan heshiiskaaga wareejintaas.
Shirkaddu waxay qaadi doontaa dhammaan tillaabooyinka macquulka ah ee lagama maarmaanka u ah inay hubiso in xogtaada loola dhaqmo si ammaan ah oo waafaqsan siyaasaddan asturnaanta ah oo aan xogtaada shakhsi ahaaneed lagu wareejinayn urur ama waddan haddii aanay jirin maamul ku filan oo meesha ka jira oo ay ku jiraan amniga Xogtaada iyo macluumaadka kale ee khaaska ah.
Shaacinta Xogtaada Shaqsiyeed
Wax kala iibsiga Ganacsiga
Haddii shirkadu ay ku lug leedahay iskudarka, iibsiga ama iibinta hantida, xogtaada shakhsi ahaaneed waa la wareejin karaa. Waxaan ku siin doonaa ogaysiis ka hor inta aan xogtaada shakhsiyeed la wareejinin oo aan la hoos gelinin siyaasad asturnaanta ah oo kala duwan.
Xaalado gaar ah, shirkadda waxaa laga yaabaa in looga baahdo inay shaaciso xogtaada shakhsi ahaaneed haddii sharcigu u baahdo inay sidaas samayso ama iyadoo laga jawaabayo codsiyada saxda ah ee masuuliyiinta dawladda (tusaale ahaan maxkamad ama hay’ad dawladeed).
Shirkadu waxa ay shaaca ka qaadi kartaa Xogtaada Shakhsi Ahaaneed iyada oo aaminsan in ficilka noocaas ahi uu lagama maarmaan u yahay:
U hoggaansamida waajibaadka sharciga ah
Ilaali oo difaac xuquuqda ama hantida Shirkadda
Kahortag ama baadh dambiyada suurtagalka ah ee la xidhiidha Adeegga
Ilaali badbaadada shakhsi ahaaneed ee Isticmaalayaasha Adeegga ama dadweynaha
Ka ilaali masuuliyadda sharciga ah
Amniga Xogtaada Shakhsiyeed waa noo muhiim, laakiin xusuusnow inuusan jirin hab la isugu gudbiyo internetka, ama habka kaydinta elegtarooniga ahi aanu 100% ammaan ahayn. In kasta oo aan ku dadaalno in aan isticmaalno habab ganacsi ahaan la aqbali karo si aan u ilaalinno Xogtaada Shaqsiyeed, Ma dammaanad qaadi karno ammaankeeda buuxda.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan habsocodka Xogtaada Shakhsi Ahaaneed
Bixiyeyaasha Adeeggu waxay heli karaan Xogtaada Shakhsi Ahaaneed kaliya si ay u gutaan waajibaadkooda iyaga oo naga wakiil ah oo waxaa ku waajib ah in aysan shaacinin ama u isticmaalin ujeedo kale.
Waxaa laga yaabaa inaan isticmaalno adeeg bixiyayaasha dhinaca saddexaad si aan ula socono oo aan u falanqeyno isticmaalka Adeeggayada.
Emaylka Suuq geynta
Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno Xogtaada Shakhsi Ahaaneed si aan kala soo xiriirno wargeysyada, suuq geynta ama agabka xayaysiinta iyo macluumaadka kale ee laga yaabo inaad daneynayso. Waxaad ka bixi kartaa inaad hesho mid, ama dhammaan, isgaarsiintan naga timid adiga oo raacaya iskuxirka ka bixida ama tilmaamaha lagu bixiyo iimayl kasta oo aan dirno ama nala soo xiriiro.
Waxa laga yaabaa in aan u isticmaalno adeeg bixiyayaasha suuq geynta iimaylka si aan kuugu maameeyno oo aan kuugu soo dirno iimaylo.
Aasaaska Sharci ee Habaynta Xogta Shakhsiyeed ee hoos timaada GDPR
Waxa laga yaabaa in aanu ku shaqayno Xogta Shakhsiga ah xaaladaha soo socda:
Oggolaanshaha: Waxaad bixisay oggolaanshahaaga habaynta Xogta Shakhsiyeed hal ama ka badan oo ujeeddooyin gaar ah.
Waxtarka qandaraaska: Bixinta Xogta Shakhsi ahaaneed waxay lagama maarmaan u tahay fulinta heshiiska Adiga iyo/ama wixii waajibaad ah ee heshiiska ka hor.
Waajibaadka sharciga ah: Habaynta Xogta Shaqsiyaaddka waxay lagama maarmaan u tahay u hoggaansanaanta waajibaadka sharci ee Shirkaddu ay ku xiran tahay.
Danaha muhiimka ah: Habaynta Xogta Shakhsi ahaaneed waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo danahaaga muhiimka ah ama qof kale oo dabiici ah.
Danaha guud: Habaynta Xogta Shaqsiyeedka waxay khuseeysa hawl lagu fuliyo danta guud ama ku dhaqanka awoodda rasmiga ah ee Shirkadda.
Danaha xalaasha ah: Habaynta Xogta Shakhsiyeedka waxay lagama maarmaan u tahay ujeedooyinka danaha xalaasha ah ee ay wado Shirkaddu.
Si kastaba ha ahaatee, Shirkaddu waxay si farxad leh u caawin doontaa inay caddeyso aasaaska sharci ee gaarka ah ee khuseeya habaynta, iyo gaar ahaan haddii bixinta Xogta Shakhsi ahaaneed ay tahay shuruud sharci ama heshiis, ama shuruud lagama maarmaan u ah gelitaanka heshiiska.
Xuquuqdaada hoos timaada GDPR
Shirkaddu waxay ballan qaadaysaa inay ixtiraamto sirta Xogtaada Shakhsi Ahaaneed waxayna dammaanad qaadaysaa inaad gudan karto xuquuqdaada.
Waxaad xaq u leedahay sida uu dhigayo siyaasaddan asturnaanta ah, iyo sharci ahaan haddii aad ku jirto gudaha EU, inaad:
Codso helitaanka Xogtaada Shakhsi Ahaaneed. Xuquuqda aad u leedahay inaad hesho, cusbooneysiiso ama tirtir macluumaadka aan kugu hayno. Mar kasta oo suurtogal ah, waxaad si toos ah u heli kartaa, cusbooneysiin kartaa ama codsan kartaa tirtirka Xogtaada Shakhsi Ahaaneed gudaha qaybta dejinta akoonkaaga. Haddii aadan adigu awoodin inaad sameyso hawlahan, fadlan nala soo xiriir si aan kuu caawinno. Tani waxay sidoo kale awood kuu siineysaa inaad hesho nuqul ka mid ah Xogta Shakhsi ahaaneed ee aan adiga kaa hayno.
Codso sixitaanka xogta shakhsi ahaaneed ee aanu kaa hayno. Waxaad xaq u leedahay in la saxo wixii macluumaad ah oo aan dhammaystirnayn ama aan sax ahayn.
Ujeedada habaynta Xogtaada Shakhsi Ahaaneed. Xuquuqdani waxay ka jirtaa halka aan ku tiirsanahay dano xalaal ah oo ah aasaaska sharciga ee habayntayaga oo waxaa jira wax ku saabsan xaaladaada gaarka ah, taas oo ka dhigaysa inaad rabto inaad diido habayntaXogtaada Shakhsi Ahaaneed ee goobtan. Waxa sidoo kale aad xaq u leedahay in aad diido halka aanu ku shaqayno Xogtaada Shakhsi Ahaaneed ujeedooyin suuq geyn toos ah.
Codso tirtirka Xogtaada Shakhsi Ahaaneed. Waxaad xaq u leedahay inaad naga codsato inaan tirtirno ama saarno Xogta Shakhsiyeedka marka aysan jirin sabab macquul ah oo aan ku sii wadno socodsiinta.
Codso wareejinta Xogtaada Shakhsi Ahaaneed. Waxaanu ku siin doonaa Adiga, ama dhinaca saddexaad oo aad dooratay, Xogtaada Shakhsi Ahaaneed qaab habaysan, caadi ahaan loo isticmaalo, qaabka mishiinku akhriyi karo. Fadlan ogow in xuquuqdan kaliya ay khusayso macluumaadka otomaatiga ah ee aad markii hore naga siisay oggolaansho si aan u isticmaalno ama halka aan u isticmaalnay macluumaadka si aan u qabanno heshiiskaas.
La noqo Ogolaanshahaaga. Waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto ogolaanshahaaga adoo isticmaalaya Xogtaada Shakhsi Ahaaneed. Haddii aad ka noqoto oggolaanshahaaga, waxaa laga yaabaa inaanu ku siin weyno fursad aad ku heli kartid howlaha gaarka ah la hubo ee adeegga ah.
Ka shaqaynta Xuquuqda Ilaalinta Xogtaada ee GDPR
Waxaa laga yaabaa inaad ka shaqaysato xuquuqdaada helitaanka, sixitaanka, baajinta iyo mucaaradka adoo nala soo xiriiraya. Fadlan ogow in aan kaa codsan karno inaad xaqiijiso aqoonsigaaga kahor intaadan ka jawaabin codsiyadaas oo kale. Haddii aad codsi noo soo dirsato, waxaan isku dayi doonnaa intii karaankeena ah inaan ka jawaabino sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaad xaq u leedahay inaad ka cabato awood ilaalin xog ah oo ku saabsan ururinta iyo adeegsiga Xogtaada Shakhsi Ahaaneed. Wixii macluumaad dheeraad ah, haddii aad ku jirtid Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA), fadlan kala xiriir Hay’adda Ilaalinta Xogta deegaankaaga ee EEA.
Bogga Shirkadda ee facebook
Maamulaha Xogta ee Bogga Shirkadda ee Facebook
Shirkadda waa maamulaha xogta ee Xogtaada Shakhsi Ahaaneed ee la soo aruuriyay iyadoo la isticmaalayo adeegga. Sida hawl wadeenka ka shaqeeya Bogga Shirkadda ee facebook (https://www.facebook.com/CarewellSEIU503), Shirkadda shirkadda iyo hawl wadeenka shabakada bulshada ee Facebook waa maamulayaasha wadajirka ah.
Shirkaddu waxay Facebook la gashay heshiisyo qeexaya shuruudaha isticmaalka Bogga Shirkadda ee Facebook, iyo waxyaabo kale. Shuruudahani waxay inta badan ku salaysan yihiin Shuruudaha Adeegga ee Facebook: https://www.facebook.com/terms.php
Booqo Siyaasadda Asturnaanta ah ee Facebook https://www.facebook.com/policy.php si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida Facebook u maareeyo xogta shakhsi ahaaneed ama la xidhiidh Facebook onlaynka, ama boostada: Facebook, Inc. ATTN, Hawlaha Asturnaanta 1601 Waddada Willow, Beerta Menlo, CA 94025, Maraykanka.
Waxaan u isticmaalnaa shaqada Facebook Insights ee la xiriirta hawlgalka Bogga Shirkadda ee Facebook iyo iyada oo ku saleysan GDPR, si aan u helno xog tirakoob oo qarsoodi ah oo ku saabsan isticmaaleyaashayada.
Ujeedadan awgeed, Facebook waxa uu dul dhigayaa kuuka aalada isticmaalaha booqanaya Bogga Shirkadda ee Facebook. Kuuk kastaa wuxuu ka kooban yahay koodh aqoonsi gaar ah wuxuuna sii shaqaynayaa muddo laba sano ah, marka laga reebo marka la tirtiro ka hor dhammaadka muddadan.
Facebook waxa ay heshaa, diiwaangelisaa oo habaysaa macluumaadka ku kaydsan Kuukyada, gaar ahaan marka uu isticmaaluhu soo booqdo adeegyada Facebook, adeegyada ay bixiyaan xubnaha kale ee Bogga Shirkadda ee Facebook iyo adeegyada ay bixiyaan shirkadaha kale ee isticmaala adeegyada Facebook.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhaqamada asturnaanta ah ee Facebook, fadlan booqo Siyaasadda Asturnaanta Facebook halkan: https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Xuquuqdaada hoos timaada CCPA
Sida waafaqsan siyaasaddan asturnaanta ah, iyo sharciga haddii aad degan tahay California, waxaad leedahay xuquuqaha soo socda:
Xaqa ogeysiinta. Waa in si sax ah laguugu ogeysiiyaa qaybaha xogta shakhsi ahaaneed ee la ururinayo iyo ujeedooyinka loo isticmaalayo xogta shakhsi ahaaneed.
Xaq u lahaanshaha helitaanka/xaqa codsashada. CCPA waxay kuu ogolanaysaa inaad codsato oo aad ka hesho shirkada macluumaadka khuseeys shaacinta Xogtaada Shakhsi Ahaaneed ee ay soo ururisay shirkada 12 bilood ee la soo dhaafay cid saddexaad oo ujeeddooyin suuq geyn toos ah u lahaa.
Xaq u yeelshada inaad dhahdo maya iibinta Xogta Shakhsiyeedka. Waxaad sidoo kale aad xaq u leedahay in aad ka codsato Shirkadda in aanay ka iibin Xogtaada Shakhsi Ahaaneed dhinac saddexaad. Codsiga noocaas ah waxaad ku soo gudbin kartaa adigoo booqanaya qaybtayada "Ha Iibiinin Macluumaadkayga Khaaska ah" ama bogga websaydka.
Xaqqa aad u leedahay inaad wax ka ogaato Xogtaada Shakhsi Ahaaneed. Waxaad xaq u leedahay inaad codsato oo aad ka hesho macluumaadka Shirkadda ee khuseeya shaacinta kuwan soo socda:
Qaybaha Xogta Shakhsiyeed ee la ururiyay
Kheyraadka kaas oo laga soo ururiyay Xogta Shakhsiyeedka
Mehradaha ama ujeedada ganacsi ee ururinta ama iibinta Xogta Shakhsiyeedka
Qaybaha dhinaca saddexaad ee aanu la wadaagno Xogta Shakhsi ahaaneed
Qaybaha gaarka ah ee Xogta Shaqsiyeedka ee aanu ka soo uruurinay adiga
Xaq u yeelashada inaad tirtirto Xogta Shakhsiyeed. Waxaad sidoo kale aad xaq u leedahay inaad codsato tirtirka Xogtaada Shakhsi Ahaaneed ee la ururiyey 12 bilood ee la soo dhaafay.
Xaqqa ah in aan lagu takoori karin. Waxaad xaq u leedahay in aan lagugu takoorin isticmaalka mid ka mid ah xuquuqaha Macaamilkaaga, oo ay ku jiraan:
Adiga oo laguu diido baddeecada ama adeeg
Ku dallacida qiimayaal kala duwan ama qiimaha badeecada ama adeegyada, oo ay ku jiraan isticmaalka qiimo dhimis ama faa’iidooyin kale ama ciqaabo lagu soo rogo
Bixinta heerar kala duwan ama badeecddo tayo leh ama adeegyo adiga
Soo jeedinta in aad heli doonto qiimo ka duwan ama qiimaha badeecada ama adeegyada ama heer ka duwan ama tayada badeecada ama adeegyada.
Ka shaqaynta Xuquuqdaada Ilaalinta Xogta CCPA
Si aad u isticmaasho mid ka mid ah xuquuqdaada hoos timaada CCPA, iyo haddii aad tahay degane California, Waxaad noo soo diri kartaa iimayl ama na soo wici kartaa ama booqo boggayaga qaybta "Ha Iibiin Macluumaadkayga Khaaska ah" ama bogga websaydka.
Shirkaddu waxay shaacin doontaa oo ku keeni doontaa macluumaadka loo baahan yahay lacag la’aan 45 maalmood gudahooda markaad hesho codsigaaga la xaqiijin karo. Muddada bixinta macluumaadka loo baahan yahay waxaa lagu kordhin karaa hal mar 45 maalmood oo dheeraad ah marka macquulka ah loo baahdo iyo ogeysiis hore.
Ha Iibiin Macluumaadkayga Khaaska ah
Ma iibinno macluumaadka shakhsiyeed. Si kastaba ha ahaatee, Bixiyeyaasha Adeegga ee aanu shuraako la nahay (tusaale ahaan, shurakadayada xayaysiisyada) waxa laga yaabaa inay u adeegsadaan tignoolajiyada Adeegga “iibiya” macluumaadka shakhsiyeed sida uu qeexayo sharciga CCPA.
Haddii aad rabto inaad ka baxdo u adeegsiga macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeedooyin xayaysiis ku salaysan iyo iibkan suurtogalka ah sida lagu qeexay sharciga CCPA, waxaad sidaas samayn kartaa adoo raacaya tilmaamaha hoos kuxusan.
Fadlan ogow in ka bixitaan kasta uu gaar u yahay biraawsarka aad isticmaasho. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka baxdo biraawsar kasta oo aad isticmaasho.
Waxaad ka bixi kartaa helitaanka xayaysiisyada gaarka loo leeyahay sida ay ugu adeegaan Bixiyeyaasha Adeegga adiga oo raacaya tilmaamaha lagu soo bandhigay Adeegga:
Ka socota "Oggolaanshahayaga Kuukyada" boodhka ogeysiiska
Ama ka socda boodhayaga ogeysiiska "CCPA Opt-out"
Ama boodhadhkayaga "ha iibin macluumaadkayga shakhsi ahaaneed"
Ama laga helo iskuxirkayaga "Ha Iibiina Macluumaadkayga Khaaska ah"
Ka bixistu waxay saaraysaa kuuku kumbiyuutarkaaga u gaar ah biraawsarka aad isticmaasho si aad uga baxdo. Haddii aad beddesho biraawsaryada ama aad tirtirto kuukyada uu kaydiyay biraawsarkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad mar kale ka baxdo.
Aaladaada moobaylka waxa laga yaabaa inuu ku siiyo awood aad kaga baxdo isticmaalka macluumaadka ku saabsan app-ka aad isticmaasho si loogu adeego xayaysiisyada lagu bartilmaameedsanayo danahaaga:
"Ka bax xayaysiisyada ku salaysan xiisaha" ama "Ka bixida shakhsiyaynta xayeysiiska" ee aalada Android
"Xaddid Raadinta Xayeysiiska" ee aalada iOS
Waxa kale oo aad joojin kartaa ururinta macluumaadka goobta ee aaladaada gacanta adiga oo bedelaya dookhyada aaladaada gacanta.
Siyaasadda "Ha Raad raacin" sida uu rabo Xeerka Ilaalinta Asturnaanta onlaynka ah ee California (CalOPPA)
Adeegeena kama jawaabo Ha la socon calaamadaha.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah websaydyada dhinaca saddexaad ayaa la socda hawlahaaga daalacashada. Haddii aad booqanayso websaydyadaas oo kale, waxa aad dookhyadaada ku dhejin kartaa biraawsarkaaga si aad ugu wargeliso websaydyada in aadan doonayn in lagu daba galo. Waxaad awood u yeeli kartaa ama kadhimi kartaa DNT adoo booqanaya dookhyada ama bogga dejinta ee biraawsarkaaga.
Adeeggu waxaa ku jiri karaa xog ku habboon carruurta ay da’doodu ka yar tahay 13 jir. Waalid ahaan, waa inaad ogaataa in adeega carruurta da’doodu ka yar tahay 13 ay ka qaybgali karaan hawlaha ku lug leh ururinta ama isticmaalka macluumaadka shakhsiyeed. Waxaan isticmaalnaa dadaallo macquul ah si aan u hubinno in ka hor inta aanan ka ururinin macluumaadka shakhsiga ah ee ilmaha, waalidka ilmaha uu helo ogeysiis iyo ogolaanshaha ku dhaqanka xogtayada shaqsiyeed.
Waxa kale oo laga yaabaa inaan xaddidno sida aan u ururino, u isticmaalno, oo u kaydinno qaar ka mid ah macluumaadka Isticmaalayaasha inta da’doodu u dhaxaysa 13 iyo 18 jir. Xaaladaha qaarkood, tani waxay la macno tahay Ma awoodi doono inaan siino isticmaalayaasha qaar ka mid ah shaqeynta adeegga. Haddii aan u baahanahay inaan ku tiirsanaano ogolaanshaha sifo sharci ah si loo habeeyo macluumaadkaaga iyo dalkaagu wuxuu uga baahan yahay ogolaanshaha waalidka, waxa laga yaabaa inaan u baahano ogolaanshaha waalidka ka hor inta aanan ururinin oo isticmaalin macluumaadkaas.
Waxa laga yaabaa in aan ka codsano Isticmaalaha in uu xaqiijiyo taariikhda dhalashada ka hor inta aan laga soo ururinin wax macluumaad shakhsi ah iyaga. Haddii isticmaaluhu uu da’diisu ka yartahay 13, Adeegga waa la xannibi doonaa ama waxaa loo wareejin doonaa nidaamka oggolaanshaha waalidka.
Macluumaadka Laga Soo Ururiyay Carruurta Da’doodu Ka Yartahay 13
Shirkaddu waxa laga yaabaa inay ururiso oo kaydiso aqoonsiyada joogtada ah sida kuukyada ama ciwaanka IP-ka ee Carruurta iyaddoo aan oggolaansho waalid laga helin ujeeddada lagu taageerayo hawlgalka gudaha ee Adeegga.
Waxa laga yaabaa in aanu ururino oo aanu kaydino macluumaadka kale ee shakhsiga ah ee ku saabsan carruurta haddii macluumaadkan uu soo gudbiyo ilmo leh oggolaansho waalid ka hor ama waalidka ama masuulka ilmaha.
Shirkaddu waxaa laga yaabaa inay uruuriso oo ay kaydiso noocyada soo socda ee macluumaadka shakhsiyeed ee ku saabsan ilmaha marka uu soo gudbiyo ilmo haysta oggolaansho waalid ka hor ama waalidka ama masuulka ilmaha:
Magaca koowaad iyo/ama kan awoowga
Magaca waalidka ama masuulka
Ciwaanka emaylka waalidka ama masuulka
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka laga yaabo inaan ururinno, waxaad ka tixraaci kartaa "Noocyada Xogta La Ururiyey" ee qaybta Siyaasaddan Asturnaanta ah. Waxaan raacnaa Siyaasaddayada Asturnaanta ah ee heerka shaacinta macluumaadka shakhsiyeed ee laga soo ururiyay iyo ku saabsan carruurta.
Waalidka horey u siiyey Shirkadda fasaxa si ay u ururiyaan oo u isticmaalaan macluumaadka shakhsiyeed ee ubadkood way awoodaan, wakhti kasta:
Dib u eeg, sax ama tirtir macluumaadka gaarka ah ee ilmaha
Jooji ururinta dheeraadka ah ama isticmaalka macluumaadka gaarka ah ee ilmaha
Si aad u samayso codsigan oo kale, waxaad qoraal noogu soo diri kartaa adiga oo isticmaalaya macluumaadka xidhiidhka ee lagu bixiyay siyaasaddan asturnaanta ah.
Xuquuqdaada Asturnaanta ah ee California (Sharciga California’s Shine the Light)
Sida hoos timaada Xeerka Madaniga ah ee California Qaybta 1798 (Sharciga California’s Shine the Light), deganayaasha California ee nala leh xidhiidh ganacsi waxay codsan karaan macluumaad sannadkiiba hal mar ku saabsan la wadaagga xogtooda shakhsi ahaaneed dhinac saddexaad ee dhinacyada saddexaad ujeeddooyinka suuq geynta toos ah.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad codsato macluumaad dheeraad ah oo hoos yimaada sharciga California Shine the Light, waxaad nagala soo xiriiri kartaa adiga oo isticmaalaya macluumaadka xiriirka ee hoos kuxusan.
Xuquuqda Asturnaanta ah ee California ee Isticmaalayaasha Yaryar (Ganacsiga California iyo Xeerka Xirfadaha Qaybta 22581)
Xeerka Ganacsiga iyo Xirfadaha California Qaybta 22581 wuxuu u oggolaanayaa dadka deggan California ee da’doodu ka yar tahay 18 jir kuwaas oo ka diiwaangashan isticmaaleyaasha goobaha onlaynka ah, adeegyada ama dallabyada inay codsadaan oo ay helaan ka saarista waxa ku jira ama macluumaadka ay si cad usoo bandhigeen.
Si aad u codsato ka saarida xogtaas, iyo haddii aad degan tahay California, waxaad nagula soo xiriiri kartaa adiga oo isticmaalaya macluumaadka xiriirka ee hoos ku qoran, oo ku dar ciwaanka iimaylka ee la khuseeya akoonkaaga.
La soco in codsigaagu aanu dammaanad qaadaynin dhamaystir ama ka saarid dhamaystiran ee waxa ku jira ama macluumaadka lagu dhajiyay onlaynka iyo in sharcigu aanu ogolayn ama u baahnayn ka saarida xaaladaha qaarkood.
Xiriiriyeyaasha Websaydyada Kale
Adeeggayagu waxaa laga yaabaa inuu ku jiro iskuxirka websaydyada kale kuwaas oo aanu annagu kashaqaynin. Haddii aad gujiso iskuxirka dhinaca saddexaad, waxaa laguu tilmaami doonaa taas goobta dhinaca saddexaad. Waxaan si adag kuugula talineynaa inaad dib u eegto siyaasadda asturnaanta ah ee goob kasta oo aad booqato.
Ma lihin wax maamul ah mana qaadaneyno mas’uuliyadda waxa ku jira, siyaasadaha asturnaanta ah ama dhaqamada goobaha ama adeegyo dhinac saddexaad ah.
Isbeddellada ku socda siyaasaddan asturnaanta ah
Waxaa laga yaabaa inaan cusboonaysiinno siyaasaddayada Asturnaanta waqti ka waqti. Waan ku ogeysiin doonaa wax kasta isbedel ah annagoo ku dhejineyno siyaasadda cusub ee Asturnaanta ah boggan.
Waxa aanu kugu ogaysiin doonaa iimaylka iyo/ama ogaysiis caan ah oo adeegayaga ku saabsan, ka hor inta aanu isbeddelku noqon mid hirgala oo aanu dib u cusboonaysiinno taariikhda "Cusbooneysiintii Ugu Dambeysey" ee ku taal xagga sare ee Siyaasaddan Asturnaanta ah.
Waxaa lagugula talinayaa inaad dib u eegto Siyaasaddan Asturnaanta ah waqti kasta oo isbedel kasta ah. Isbeddellada lagu sameeyo siyaasaddan Asturnaanta ah ayaa wax ku ool leh marka lagu dhejiyo boggan.
Haddii aad wax su’aalo ah ka qabto siyaasaddan asturnaanta, waxaad nala soo xidhiidhi kartaa: